मोबाईल हरायो भने प्रहरी कहाँ धाउन पर्दैन, मोबाईल भेटाउने सजिलो तरिका जान्नुस् ! | suryakhabar.com
Home सूचना प्रविधि मोबाईल हरायो भने प्रहरी कहाँ धाउन पर्दैन, मोबाईल भेटाउने सजिलो तरिका जान्नुस् !
मोबाईल हरायो भने प्रहरी कहाँ धाउन पर्दैन, मोबाईल भेटाउने सजिलो तरिका जान्नुस् !
on: १ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १२:४५ In: सूचना प्रविधिTags: No Comments
काठमाडौं । अहिले महंगा मोवाइल प्रयोग गर्ने एक प्रकारको फेसन नै बनेको छ । साथै मानिसहरुले मोवाइलाई बहुउपयोगी साधानका रुपमा पनि प्रयोग गर्छन् । मोवाइलमा फोन नम्बर मात्रै हैन, जिन्दगीका कतिपय अविस्मरणीय पल पनि राखिएका हुन्छन् ।
जब मोवाइल हराउँछ एकतर्फ पैसाको क्षति हुन्छ भने अर्कोतर्फ मोवाइलमा रहेका उपयोगी सामग्री नष्ट हुन्छन् । तरपनि मोबाइल हराउने खतरा जहिले पनि हुन्छ । यस्तोमा हराएको मोबाइल कसरी फेला पार्ने ? यो आलेखमा हराएको मोवाइल फेला पार्ने उपयोगी उपाय उल्लेख गरिएको छ ।
यो उपायले एन्ड्रोइड फोनमा मात्रै काम गर्छ । यसका लागि निम्नखिखित उपायहरु अपनाउनुहोस् ।
यसको अलावा यहाँ तीन अप्सन, ‘रिङ, लक र इरेज’ दिइएको हुन्छ । रिङ अप्सनमा क्लिक गर्दा तपाइको फोनको घन्टी बज्छ । लक अप्सनमा जाँदा स्त्रिनमा पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ । इरेज अप्सनको प्रयोग गर्दा एन्ड्रोइड फोनमा भएका तपाईका सबै निजी डाटाहरू मेटिन्छन् । -एजेन्शीको सहयोगमा
नाराणकाजीले फोरमसँग भएको सहमतीबारे मुख खोले
वर्षायाम नलाग्दै विपद्
सात महिना बाँकी हुँदै रेडियो नेपालका प्रमुख कार्कीले दिए पदबाट राजीनामा
२८ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०८:०७
१ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १२:४५